आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (९ असार २०७९ बिहीबार, २३ जुन २०२२) Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (९ असार २०७९ बिहीबार, २३ जुन २०२२)
९ असार २०७९, बिहीबार ००:०१
श्रीशाके १९४४ नेपाल सं. ११४२ ग्रीष्म ऋतु वि.सं. २०७९ आषाढ ९ गते बिहीबार तद्अनुसार सन् २०२२ जुन २३ तारिख आषाढ कृष्णपक्षको दशमी तिथि रेवती नक्षत्र १०:२५ पर अश्विनी नक्षत्र शोभन योग वणि करण आनन्दादिमा मित्र योग चन्द्रमा मीन राशिमा १०:२५ बजेसम्म त्यसपछि मेष राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाण्डौमा सूर्योदय बिहान ५:११ बजे भयो र सूर्यास्त साँझ १९:०१ बजे हुनेछ ।
मेष – आज मन हर्षित तुल्याउने पाहुनाको आगमन हुन सक्छ । समय शुभ फलदायक छ । आयआर्जनमा पनि राम्रो दिन छ । केहि नयाँ काम गर्नको लागि परिवारजनको उचित सल्लाह आउने देखिन्छ । मनोकूलको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । मान–सम्मान प्राप्त हुनेछ ।
वृष – आजको दिन इष्टमित्र एवम् सन्तानको सुख प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । कामहरु पनि सजिलैसँग बन्नेछन् । हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । नयाँ काम पाउने योग छ भने धन आर्जनको अवसर मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । नयाँ आयस्रोत बढ्नुसँगै उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नुसंगै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
मिथुन – आजको दिन कर्मबल बढ्नेछ तर धनमाल हराउनाले मनमा पिडा थपिने छ, सजक रहनुहोला । स्वास्थ्य पनि बिग्रन सक्छ । अरूको भर पर्दा काममा धोका हुन सक्छ, टाढाको यात्रा आज नगर्नु उचित होला । व्यर्थको खर्च हुने प्रवल योग छ । सफलता प्राप्त हुने र रोकिएको काम बन्नेछ । सम्पत्ति बढ्नेछ । भागदौड बढ्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ ।
कर्कट – आज सजिलैसँग काम नबन्न सक्छ । काम बिग्रने र रुपैयाँपैसाको लेनदेन पनि खासै राम्रो छैन । मातृधनको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिनेछ । बन्न लागेको काम बिग्रन गइ मनमा चिन्ता बढ्न सक्छ । ठूलो सहयोगको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्, सचेत रहनुहोस् । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
सिंह – बिस्तारै शुभता बढ्नेछ । आफन्तसित भेटघाट हुनेछ । घरायसी काममै दिन जाने देखिन्छ र राम्रै कमाइ हुने योग छ । पठनपाठनमा पनि प्रगति हुनेछ । खर्च भन्दा कमाई नै बढी हुनेछ । इष्टमित्र सन्तानको सुख प्राप्त हुनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति विजय प्राप्त हुनेछ ।
धनु – आरोग्य बढ्नेछ । ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । आफ्नै बल विवेकले कार्य गर्नु बेस रहला । नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । साथै खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ । वैवाहिक जीवन सुखी हुने खालको दिन छ, यात्राको पनि योग रहेको छ । शारीरिक र आर्थिक हीत हुने काममा लाग्नु उचित रहला ।
कुम्भ – आज व्यर्थको खर्च हुने सम्भावना रहेकोले ब्यर्थको खर्च कटौत ीगर्ने प्रयास गर्नुहोला । खानामा पनि एकदमै सावधान रहनुहोला रोग लाग्न सक्छ । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला, साथै परिवारमा पनि समस्या आउनेछ । समय राम्रो भए पनि आज खर्च बढ्ने योग छ । घरपरिवारको स्थिति अनुकूल रहनेछ । कार्यव्यवस्था क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ ।
मीन – समय शुभ भाग्यवर्धक छ । आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ । मुद्दा(मामिलामा विजयी भइनेछ । आज धनलाभको योग छ । पढाइमा प्रगति होला, साथै दिन खुशीसाथ बित्ने छ । प्रयासरत काममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । मनअनुकूलको काम बन्नेछ । मीठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखी र सफल रहनुहुनेछ । रोगबाट छुट्कारा पाउनुहुनेछ ।